I-DOT/USD yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: IDOTI / iUSD
IPolkadot's (DOT) ixabiso kwi ukulungiswa ezantsi kodwa ekujoliswe kwinqanaba $30.41. I-cryptocurrency yenza i-uptrend emfutshane kodwa ibambelele ngaphantsi kwe-$ 28 yendawo yokumelana. Kwiiyure ze-48 ezidlulileyo, iinkunzi zenkomo ziye zazama ukuphuka ngaphezu kwe-27 yezinga lokumelana ne-$. Ixabiso le-DOT liye lanyanzeliswa ukuba litshintshe phakathi kwe-$ 25 kunye ne-$ 28 yamanqanaba exabiso. Kwicala eliphezulu, ukuba iinkunzi zenkomo ziphumelele, i-Polkadot iya kuphinda iqalise ukuhamba. Imakethi iya kuphakama ukuvavanya kwakhona ukuchasana okulandelayo kwinqanaba le-30 yeedola. Ukunyuka kwe-bullish kuya kunyuka ukuya phezulu kwi-55 yeedola. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso libuyisela kwaye liphule ngaphantsi kwenkxaso ye-$ 25, i-Polkadot iya kuphinda ibuyele kwi-23 yangaphambili ephantsi.
I-altcoin ikwinqanaba le-50 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba kukho ukulingana phakathi kokubonelela kunye nemfuno. Umyinge weentsuku ze-21 ezihambayo zisebenza njengokumelana nexabiso le-DOT. Umgca weentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zomyinge ohambayo uthambeka emazantsi ebonisa ukuhla.
Kwitshathi yeeyure ze-4, ixabiso le-DOT likwi-uptrend. I-uptrend ithintelwe ukuchasana kwi-$ 27. Okwangoku, ngoJanuwari 12 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kunyuka kwinqanaba le-1.618 yezandiso zeFibonacci okanye i-$ 30.41.
I-Polkadot ingaphantsi kwe-50% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukunyuka.
I-DOT/USD iphinde yafumana amandla e-bullish njengoko ijolise kwinqanaba le-30.41 yeedola. Ngokutsho kohlalutyo lwesixhobo seFibonacci, imarike iya kuphakama kwinqanaba le-30 yeedola kodwa iya kujongana nokuchaswa kokuqala kwinqanaba eliphezulu lamva nje.
I-Polkadot (i-DOT) iyaguquguquka kuLuhlu oluQinisekileyo, iMisa kwiXabiso eliBuyelweyo
Inqanaba lenkxaso engundoqos: $ 40, $ 38, $ 36
Ixabiso lePolkadot (DOT) ibikwi-downtrend njengoko ilungiselela ukuphinda kwexabiso. Uxinzelelo lokuthengisa luye lwancipha njengoko ixabiso lifikelela kwi-23 yeedola. Namhlanje, i-cryptocurrency iphinde yaqala indlela esecaleni. Abathengi benze iinzame ezingxamisekileyo zokutyhala amaxabiso e-DOT ukuya phezulu. Ukulungiswa okuphezulu kuye kwajongana nokugatywa kwi-32 ephezulu ye-$. Ukukhatywa kwamva nje kwakukwi-$ 30 ephezulu apho ixabiso lawela phantsi kwe-$ 24 ephantsi. I-DOT / i-USD iye yatshintsha ngaphezu kwe-$ 24 kunye ne-$ 25 amanqanaba exabiso. . I-Polkadot iya kuphinda iqalise ukuthambekela ukuba ixabiso liyophuka ngaphezulu kwe-32 ye-dollar yokuxhathisa kwaye isantya se-bullish sizinzileyo. Inkxaso yangoku ibambe ukusukela ngomhla wesine kuDisemba.
Ixabiso le-crypto lingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezithetha ukuba i-altcoin inokuwa. I-altcoin iwele kwinqanaba le-38 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Imarike kwindawo ye-downtrend zone kodwa isondela kwi-oversold yommandla weemarike.
I-altcoin ihamba phantsi. Okwangoku, ngoNovemba 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwela kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extensions okanye i-$ 25.88. Ixabiso le-DOT lihamba ngaphezulu kolwandiso lweFibonacci.
I-crypto ingaphantsi kwe-20% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba i-altcoin ifikelele kwindawo ethengisiweyo yemarike. Ukuthengisa uxinzelelo kunokwenzeka ukuba kuphele. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka zibonisa ukuhla.
I-DOT / i-USD yokuhla ehlayo iyancipha njengoko ibeka ixabiso lokunyuka kwakhona. I-crypto iphinde yaqala ukudibanisa ngaphezu kwenkxaso ye-$ 24. I-DOT / i-USD iya kuphuma kwisilungiso esisezantsi ukuba ixabiso liphule ngaphezu kwe-$ 32 ukuchasana kunye nesantya se-bullish sigcinwa. Ngaphandle koko, i-altcoin iya kuguquguquka phakathi kwe-$ 24 kunye ne-32 yeedola.
I-Polkadot (DOT) iguquguquka ngaphezulu kwe-$27 yenkxaso, inokuthi iqalise kwakhona i-Uptrend
Ukuchasana okuphambili Amanqanaba: $60, $62, $64
IPolkadot's (DOT) ixabiso lisekwi-downtrend kodwa inokuphinda iqalise i-uptrend. Ixabiso lingaphezulu kwe-21-day line SMA kodwa ngaphantsi kwe-50-day line SMA. Ukuba inkxaso yomgca weentsuku ze-21 ibambe, ixabiso le-DOT liya kuphinda liqalise ukuguquguquka phakathi kwee-avareji ezihambayo. I-altcoin ikwisantya esiphezulu. Uvavanyo kwakhona kwi $32 ukuxhathisa kunokwenzeka njengoko inkxaso ibambe. Kwi-upside, ukuba abathengi batyhala i-altcoin ngaphezu kwee-avareji ezihambayo, kuya kubonisa ukuqaliswa kwakhona kwe-uptrend. Ngakolunye uhlangothi, ukuba iibhere ziphule ngaphantsi kwenkxaso ye-$ 27, imarike iya kuncipha ukuya kwi-$ 23.50 ephantsi.
I-crypto ikwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. I-Polkadot isekho kwi-downtrend zone kodwa ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso le-DOT lingaphezulu kwe-avareji yeentsuku ze-21 kodwa ngaphantsi kwe-avareji yeentsuku ze-50. I-avareji ezihambayo zithambeka emazantsi ebonisa ukuhla.
IPolkadot (DOT) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
I-Polkadot ikwi-downtrend kodwa imarike ilungisa phezulu. Ixabiso le-DOT lisondela kumyinge weentsuku ezingama-21 ezihambayo. Okwangoku, ngoDisemba 29 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-DOT iya kuwa kodwa iya kubuya umva kwinqanaba le-1.272 Izandiso zeFibonacci okanye i-$ 25.63.
I-Polkadot ingaphezulu kwe-40% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ixabiso le-DOT kulindeleke ukuba linyuke. Umgca weentsuku ezingama-21 kunye nomgca weentsuku ezingama-50 ohambahambayo wehla.
.Umbono Jikelele wePolkadot (DOT)
I-DOT/USD iyaguquguquka ngaphezulu kwenkxaso yeedola ezingama-27 kodwa inokuphinda iqalise i-uptrend. Uvavanyo kwakhona kwi-32 ephezulu yeedola kunokwenzeka. Isantya esiphezulu siya kuphinda siqalise ukuba i-bullish ye-bullish yandiswe ngaphezu kwe-$ 40 ephezulu.
I-Polkadot (i-DOT) i-Uptrend, ijongene noKwaliwa kwi-29 yeedola
IPolkadot's (DOT) ixabiso lifikelele ekudinweni kwe-bearish njengoko lijongene nokwaliwa kwi-$ 29. I-altcoin iphinde yanyuka ngaphezu kwe-low yangaphambili kwi-$ 23.50. I-downtrend icingelwa ukuba iphelile njengoko ixabiso lekhefu lingaphezulu kwe-21-day move average. I-uptrend yangoku iya kukhawuleziswa ukuba ixabiso le-DOT liphuka ngaphezu kwe-50-day line ezihambayo. Ngeli xesha, iPolkadot iqhubekile nokunyuka ukuya phezulu. I-cryptocurrency iya kuphinda iqalise ukunyusa ukuba abathengi batyhala i-altcoin ngaphezu komgca weentsuku ezingama-50 ezihambayo. Ngamanye amazwi, abathengi kuya kufuneka bagcine ixabiso lingaphezulu kwe-40 yeedola eziphezulu. Ukunyuka kwe-bullish kuya kufikelela kwindawo ephezulu yangaphambili ye-55 yeedola. Okwangoku, i-DOT / USD ithengisa kwi-$ 29.33 ngexesha lokushicilela.
Ixabiso le-DOT likwinqanaba le-48 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba i-altcoin isekho kwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Ixabiso le-DOT lingaphezulu komgca weentsuku ezingama-21 kwaye ungaphantsi komgca weentsuku ezingama-50. umndilili ohambayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-cryptocurrency ikwi-uptrend kodwa i-altcoin ifikelele kwindawo ethengwe kakhulu kwimarike. Okwangoku, ngoDisemba 23 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-DOT iya kuphakama kodwa iya kuguqulwa kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye i-$ 29.29.
I-altcoin ingaphezulu kwe-80% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imakethi ifikelele kwindawo ethengwe ngokugqithisileyo yemarike. Abathengisi baya kuvela ukuba batyhale amaxabiso ezantsi.
I-DOT / i-USD ibuyiselwe kwi-downtrend njengoko ijongene nokugatywa kwi-$ 29. Inkxaso yangoku ibambe njenge-altcoin rebounds. Nangona kunjalo, ukunyuka kwangoku kunokwenzeka ukuba kube kokwexeshana njengoko imarike ifikelela kwindawo ethengwe kakhulu yentengiso.
I-Polkadot (DOT) iyaguquguquka kuluhlu njengoko abathengisi bezama ukuphula iNkxaso yangoku
IPolkadot's (DOT) ixabiso lihamba phezu kwexabiso lexabiso le-$25. I-cryptocurrency iye yaguquguquka ngaphezu kwenkxaso yangoku kwi-23.95 yeedola. Ngethuba lokuhla kwexabiso le-4 kaDisemba, iibhere ziphinde zabuyisela inkxaso yangoku kabini kodwa zahluleka ukucwina i-altcoin. Kwakhona, iinkunzi zathenga iidiphu njengoko abathengi babetyhala ialtcoin inyuke. Ukulungiswa okuphezulu kwaphazamiseka kabini ngoDisemba 7 kunye ne-9 njengoko i-crypto yawa kwaye yaphinda yaqala ukuhamba-hamba. I-Polkadot sele iwele kummandla othengisiweyo ngoDisemba 4. Ngoko ke, ukunyuka okungaphezulu akunakwenzeka. Abathengi kulindeleke ukuba bavele kwindawo ethengisiweyo.
I-Polkadot ikwinqanaba le-33 le-Relative Strength Index ixesha le-14. Imarike kwindawo ye-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Imivalo yexabiso le-crypto ingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okungaphezulu. I-altcoin iya kuphakama ukuba ixabiso liqhekeza ngaphezu kwee-avareji ezihambayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Polkadot ikuhambo oluya kuluhlu. I-cryptocurrency iguquguquka phakathi kwe-$ 24 kunye ne-$ 30 amanqanaba exabiso. I-Polkadot iya kuphinda iqalise ukuthambekela xa ixabiso liqhekeza amanqanaba oluhlu. Umzekelo, ukuba ixabiso liphula i-30 yeedola zokuxhathisa kwaye isantya se-bullish sigciniwe, ukunyuka kuya kuphinda kuqalise.
Ixabiso le-DOT lingaphezulu kwe-25% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla ebonisa ukunyuka kwe-bullish. I-altcoin iphakama emva kokuwela kwixabiso eliphantsi lexabiso. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka ngasezantsi zibonisa ukuhla.
I-DOT/USD ngoku ikuluhlu olubophelelekile. I-bearish trend iyancipha ngaphezu kwenkxaso ye-$ 23.95. I-altcoin iya kuphinda iqalise i-uptrend ukuba ixabiso libuyele ngaphezu kwenkxaso yangoku.
I-Polkadot (DOT) i-Rebounds ngaphezu kwe-$ 26 ephantsi, iThagethi ye-45 yexabiso leNqanaba
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 60, $ 62, $ 64
IPolkadot's (DOT) ixabiso liwele kwi-$ 26 ephantsi njengoko i-altcoin iphinda ibuyele ngaphezu kwenkxaso yangoku. Inkxaso ye-$ 26 yinqanaba lexabiso lembali likaSeptemba 28. NgoSeptemba, i-altcoin iphinde yaphindaphinda ngaphezu kwenkxaso yangoku ukuze ifikelele kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Namhlanje, imarike ifikelele kwindawo ethengisiweyo. Amaxabiso entshukumo ehlayo kusenokwenzeka ukuba ehle. Kukho amakhandlela e-bullish ngaphezu kwenkxaso yangoku ebonisa ukunyuka okunokwenzeka kwe-altcoin. Okwangoku, i-DOT / USD ithengisa kwi-$ 27.78 ngexesha lokubhala.
I-cryptocurrency ikwinqanaba le-32 yexesha le-Relative Strength Index 14. Imarike inyuka kodwa i-altcoin ikwindawo ephantsi kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Imivalo yexabiso le-crypto ingaphantsi kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okungaphezulu.
I-Polkadot ikwisilungiso esisezantsi. I-altcoin yenza ukunyuka okuphezulu ngaphezu kwenkxaso yangoku. Okwangoku, ngoNovemba 28 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liya kuwa kodwa lihlehliselwe kwinqanaba le-1.272 Izandiso zeFibonacci okanye i-$ 25.74.
I-crypto ingaphezulu kwe-25% yendawo ye-stochastic yemihla ngemihla ebonisa ukunyuka kwe-bullish. Amabhanti estochastic athe tyaba ngokuthe tye ngaphezu kwenkxaso yangoku. I-SMA yeentsuku ze-21 kunye ne-50-day SMA zihla zinyuka ngasezantsi zibonisa ukuhla.
I-P0lkdot iphinde yaqalisa ukuya phezulu. I-altcoin iye yajikeleza ngaphezu kwenkxaso ye-$ 26 ixesha elithile. Imarike inokuthi ibambe ngaphezu kwenkxaso yangoku. Ikhandlela libonise uxinzelelo olunamandla lokuthenga ngaphezu kwenkxaso yangoku